မြန်မာတို့အတွက် မြန်မာအချိုပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Cultures » မြန်မာတို့အတွက် မြန်မာအချိုပွဲ	13
Posted by ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် on Aug 6, 2015 in Cultures, Food, Drink & Recipes, Photography | 13 comments
ထမင်းစားပြီးပြီ ဆိုတော့ မြန်မာပီပီ လက်ဖက်ကလေးမြုံ့ကြတာပေါ့ဗျာ.. နှစ်ပြန်ကြော်နဲ့ပဲ ပြင်လိုက်တယ်ဗျာ..
ဒါကတော့ ဒဂျီးအတွက် လူကြီးဆိုတော့ ဂလိုလေးမှ ကြိုက်မပေါ့
ကဲကဲ လက်ဖက်စားပြီး လက်ဖက်ရည်လေးသောက်ဖို့ သွားဝယ်လိုက်ဦးမယ်ဗျို့
ကဲကဲရပြီ ကျောက်မြောင်းက နာမည်ကြီး လက်ဖက်ရည်.. ဟုတ်လားတော့မသိဘူး
ကဲ ထမင်းစားရတာ မ၀သေးဘူးရင်တော့ ကြိုက်တာသာ နှိုက်စားတော့ ဗျို့
ကျနော်ကတော့ ပဲလှော်လေးဝါး၊ ဆေးပေါ့လိပ်လေး ဖွာ၊ ရေးနွေးကြမ်းလေးသောက်ရင်း ဇိမ်ယူလိုက်ဦးမယ်ဗျို့
နောက်ကျသွားလို့မစားလိုက်ရရင်တော့ နောက် တစ်ခေါက်မှစားဗျာ
View all posts by ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် →	Blog
ဦးကျောက်ခဲ says: ရှလွတ်စ်… လဘက်ရည်ကျဆိမ့်နဲ့ ပြာရည်ထုပ်လေးဆွဲလိုက်ရ…
အာကပါးစပ် လူဖြစ်ကျိုးနပ်သွားမယ် … သွားရည်ကျပါဘိ… ဂွိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: ရက်စက်လိုက်တာ ဆရာအုပ်ရယ်။
ဘာပဲပြောပြော လက်ဖက်ကို နှိုက်မြည်းသွားပြီ။
မုန့်လက်ဆောင်း က လှလိုက်တာ။
တောင်ပေါ်သား says: ဗိုက်ဆာတဲ့အချိန်မှ လာပြရသလားဗျ ၊
Ma Ma says: ပဲလှော်မ၀ါးခင် ဘာစားရမလဲ။
အဲဒါဘာမုန့်မှန်းမသိပဲ စားချင်လာလို့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .ကောင်းပါလေ့…ကောင်းပါလေ့…စခွင်ကို လျှာနဲ့ယက်သွားပါေ၈ျာင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2285
Ma Ei says: မနက်စာ ဘလိတ်ဖတ်လေးကို ရွှေထမင်း အုန်းသီးနိုင်းချင်းလေးရယ်
မုန့်ဦးနှောက် အုန်းနို့ဆီဆမ်းလေးကို ကော်ဖီလေးနဲ့ ဆိုရင်….
ကောင်း မှ ကောင်း နော်….
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မုန့်ပျစ်စလက် ရိုက်ပြပါအုံး
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 526
ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် says: con မကောင်းလို့ ကောင်းကောင်း reply မလုပ်နိုင်ဘူးဗျို့
Ma Ma says: မုန့်ပျစ်စလက်ဆိုတာ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ မနက်တိုင်းစားခဲ့ရတဲ့မုန့်ပဲ။
ခုနောက်ပိုင်းတော့ အတော်တွေ့ရခဲလို့ မသိတဲ့သူများသွားပြီ။
အမွှာညီအမခေါ်သွားဖို့ ရောက်ဖူးတဲ့ မြေနီကုန်းထဲကဆိုင်တစ်ဆိုင် (နာမည်မေ့နေလို့) မှာတော့ ရနိုင်တယ်။
အောင် မိုးသူ says: ကြိုက်လိုက်တာ ကြိုက်လိုက်တာ
Alinsett @ Maung Thura says: .ကောက်ညှင်းရွှေကြည်ကို အုန်းသီး ”ဖွေးဖွေး”လေးနဲ့… တစ်ခုပြီးတစ်ခု …ဗိုက်ပြည့်တဲ့အထိ..
.ပုံလေးတွေ… လက်ရာ ကောင်းချက်…
.ပုံထဲက မုန့်တွေ လက်ဖက်တွေ…တကယ် စားရရင်…လည်း အရသာရှိလိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်း… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1143
may july says: ခု ချိန်ကတော့ ပြာရည်ထုတ် ပေါတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ ..
ရှိတာလေးပဲ ဆွဲလိုက်ပီဗျို့ .. သကြားလေးနဲ့ တို့ပြီး ..
လုံမလေးမွန်မွန် says: အမလေး… သရေကျလာပြီ… အပြင်မှာ တကယ်ကျွေးဘာာာာာ